Maalinta: Ogast 9, 2018
Ankara-Istanbul YHT Line E39 Tirada bixinta natiijada xaraashka
Qabanqaabada Furfurista E39 ee Ankara-İstanbul Yht Line Tender Result 2018 / 358741 GCC xadka qiimaha 1.088.636,37 TL iyo qiyaasta qiimaha 1.603.786,30 TL TL [More ...]
Bilecik 6 K Akadamiyada Istaraatiijiyadeed Muuqaal Meelo badan oo Muhiim ah
Duqa magaalada Bilecik Nihat Can, Duqa magaalada, qodobo badan oo magaalada ah oo ay soo saartay shirkadda '6 K Smart Stops' ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay, '' magaaladeenna waxay u keentay magaaladeena sidii mashruuc tusaale ah oo loogu talagalay 6 K Smart Stops application. [More ...]
Gazipaşa Express Line oo leh Saacadaha 2.5
Waaxda Qorsheynta Gaadiidka iyo Nidaamka Tareenka ee Degmooyinka Magaalo Weynaha ayaa sameynaya dhaqdhaqaaqyo cusub shabakadaha gaadiidka ee ka socda bartamaha illaa baadiyaha si ay u siiyaan muwaadiniinta adeegyo ammaan ah, raaxo leh oo aan kala go 'lahayn. Gazipaşa-Antalya khadka tooska ah [More ...]
680 Jidka Xaafadaha Guryaha ee Boosaaso
Degmada Bursa, oo sii wadaysa dadaalkeeda si loo hubiyo marin u helka dhammaan degmooyinka Bursa, waxay sii wadeysaa hawlihii furitaanka wadooyinka ee ay ka bilaabatay xaafada 680. Bursa sidoo kale waa dhul beereed [More ...]
Wasiirka Arimaha Gudaha oo ka baaraandegay agagaarka Cevizdere Bridge
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, Ordu, ayaa ah meelaha fatahaadu saameysay. Wasiirka Turhan, isaga oo maraya wadada ka soo degaysa garoonka ayaa soo gaadhay degmada Arabsiye maalintii Arbacadii. Turhan, Cevizdere meesha, Wadada Xeebta Badda Madoow ee bixisa gaadiid iyo [More ...]
Talaabada Koowaad ee Qalabka Telefoonada Istungun iyo Xarumaha Bulshada
Talaabooyin ayaa loo qaaday Gawaarida Cusungöl Cable Car iyo aaladda qalabka bulshada, kuwaas oo lagu bilaabay baaxadda furitaanka toaykara dalxiiska jiilaalka. Waxaa ka bilaabay degmada Çaykara oo si habsami leh u raacay duqa magaalada Hanefi Tok [More ...]
Xakamaynta Kiimikada ee Gaadiidka Dadweynaha ee Diyarbakir
Xakamaynta Hawada ee Gaadiidka Dadweynaha ee Diyarbakir ayaa sii socota: Diyarbakir Dawlada Hoose ee Magaalada, heerkulka hawada ayaa kordhaya iyada oo la tixgalinayo cabashooyinka ka imanaya muwaadiniinta kor u kaca kontoroolka hawo qaboojinta ee gaadiidka dadweynaha. Gaadiidka Dadweynaha [More ...]
Khadka Mashruuca Shabakada Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Qof kasta Cabso
Dhismaha khadka tareenka ee 'Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro' wuxuu ku socday dhismaha. Shirkadaha caanka ah ee ku dhacay luminta qiimaha qadka tareenka ee ka gudbaya dhulkooda ayaa sidoo kale la weydiiyay inay weydiiyaan tareenka dhulka hoostiisa ee Isbitaalka Maskaxda ee Erenköy. [More ...]
Halkee baan ka iibsan karaa TCDD Ticket?
la saarayo gaadiidka tareenka ee Turkey waa mar dambe Ieexdo tareen meelo badan. Haddii ay kugu adag tahay inaad tikidhada ka hesho internetka ama aado miiska TCDD, waxaad imaan kartaa xafiisyada PTT. Tareen ku raac [More ...]
TCDD Dugsi Sare Shahaadada Shaqaalaha Shahaadada
Sida ku xusan ogeysiiska ay daabaceen Madaxtooyada Shaqaalaha Dawladdu, TCDD waxay shaqaalaysiisaa dambiilayaal, shaqaale joogto ah iyo qalin jabiyayaal dugsi sare si ay u shaqaaleeyaan. Codsiyada 14 Agoosto 2018 [More ...]
Gaadiidka TCDD Co. ku dhawaaqay in shaqaaluhu qaban doonaan soo dhaweynta. Sida ku xusan ogeysiiska lagu daabacay websaydhka rasmiga ah ee Madaxtooyada Madaxtooyada, shaqaalaha injineerada tababarka 73 waa la shaqaaleysiin doonaa. Baaqa lagu daabacay mareegtada rasmiga ah ee Madaxtooyada Shaqaalaha Dawladdu waa sidan; [More ...]
Apaydın ayaa baaray khadka tareenka xawaaraha sare ee Konya-Karaman
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) Agaasimaha Guud ee İsa Apaydın, Khadka Wadada Xawaaraha Sare ee Konya-Karaman ee dhismaha daraasadaha socda. Apaydın wuxuu aadaa Dhismaha Wadada Tareenka iyo Substation-ka ee Çumra [More ...]
RayHaber 09.08.2018 Warbixinta Shirka
Iibsashada Saliida Shidaalka Haydarpaşa-1 Tug Mashiinada Waaweyn iyo Qeybo kala duwan Dayactirka iyo Dayactir lagu Sameeyo Arjiga Rinjiga Qoyan iyo Golaha Qallajinta ayaa la iibsan doonaa (TÜVASAŞ) Dhismaha Saldhigga Amasya-Samsun iyo Guryaha Adeegga [More ...]
Wasiirka Turhan, dhismaha garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, “Awooda Duulista saacad walba 35 degto, 35 tagida garoonka diyaaradaha Atatürk. Marka Wajiga 1 laga hawlgaliyo Airportka cusub ee Istanbul, degida 40 iyo bixitaanka 40 ayaa la samayn karaa saacad kasta. Furitaanka 16 [More ...]